असार ३१ गते खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने, कुन राशिलाई फलिफाप ? जान्नुहोस् « Lokpath
२६ असार २०७६, बिहीबार १३:२०
अमेरिका#पक्राउ#प्रचण्ड#प्रधानमन्त्री#प्रधानमन्त्री ओली#बलात्कार#मृत्यु#शेयर बजार#संविधान दिवस#हत्या
असार ३१ गते खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने, कुन राशिलाई फलिफाप ? जान्नुहोस्
प्रकाशित मिति : २६ असार २०७६, बिहीबार १३:२०
काठमाडौ । असार ३१ गते अर्थात जुलाई १६ तारिखका दिन आकाशमा एक अद्भुत खगोलिय देखिने भएको छ । आषाढ शुक्ल पक्ष गुरु पूर्णीमाका दिन अति दुर्लभ खगोलिय खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण लाग्नेछ ।
यो चन्द्र ग्रहण एशिया, युरोप, अफ्रिकी देशहरु, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरीका को पूर्वी भागबाट देखिनेछ । उत्तर अमेरिकाको उत्तर र पश्चिम भाग र ग्रिनल्याण्डबाट देखिने छैन।
करिब ३ घण्टा लाग्ने चन्द्र ग्रहण नेपाली समय अनुसार राति १ः४६ बजेदेखि आग्नेय कोण (पूर्व र दक्षिणको बीच) बाट स्पर्श गर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जानकारी दिए । ३ः१५ मा ग्रहणको मध्यकाल हुनेछ । ४ः४५ मा मोक्षकाल अर्थात् ग्रहण सकिनेछ ।
हिन्दु धर्ममा आस्थावानहरुकालागि असार ३१ गते मंगलबार दिउँसो ४ बजेर ४६ मिनेट देखि सुतक लाग्ने हुनाले बाल, वृद्ध र बिमारी देखि बाहेकले भोजन नगर्नु उत्तम हुनेछ ।
यो चन्द्र ग्रहण उत्तरषाढा नक्षत्र, वैधृती योग, विशिष्ट करण तथा धनु र मकर राशिमा चन्द्रमाको गोचर हुँदा लाग्नेछ । यो ग्रहण धनु राशिमा रहँदा केतु र शनिसँग युती सम्बन्ध हुनेछ ।
मिथुन राशिबाट सुर्य, राहु र शुक्रको दृष्टि रहनेछ । राहु र केतुबाट अन्य ग्रहहरु समेत पिडित बन्ने हुनाले ज्योतिषीय दृष्टिकोण बाट यो चन्द्र ग्रहण खराब मान्न सकिन्छ । यसबाट विषेश गरि अतिवृष्टि, अनावृष्टि एवं प्राकृतिक विपत्तिको अवस्था आउन सक्नेछ ।
यसको असर प्राकृतिक, सामाजिक र राजनितीक क्षेत्रमा देखिनेछ । चन्द्र ग्रहणको प्रभाव शासन पद्धती मा पर्ने देखिन्छ । मन्त्री लगायत सरकारी अधिकारी हरुको कार्यमा विचलन आउनाले जनगुनासो बढ्न सक्नेछ ।
उनिहरुको जिम्मेवारी समेत हेरफेर हुन सक्नेछ । चन्द्रग्रहण को युती मंगल बुधबाट षडाष्टक योग बन्छ । यसले जलवायु परिवर्तनमा विषेश असर पार्न सक्नेछ । राजनितिक रुपमा हेर्दा नेताहरुविच मनमुटाव बढ्न सक्नेछ भने निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई हुनेछ ।
धनु राशि र मकर राशिमा ग्रहण लाग्ने हुनाले यि राशि हुने व्यक्तिहरुलाई बढि कष्ट हुन सक्नेछ । यी दुई राशिले ग्रहण हेर्नु हुँदैन । यसैगरी मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कन्या र वृश्चिक राशि हुनेले पनि ग्रहण हेर्नु नहुने समितिले स्वीकृति दिएका पात्रो (पञ्चाङ्ग) मा उल्लेख छ ।
कर्कट, तुला, कुम्भ र मीन राशि भएकाले भने ग्रहण हेर्न हुन्छ । ग्रहणका समयमा स्नान, दान, श्राद्ध, जप, ध्यान, साधनालगायत कर्म गर्न शुभ मानिन्छ । ग्रहणका समयमा दीक्षा लिन पनि उत्तम मानिन्छ ।
नेपाल टेलिकममार्फत दशैंमा १ करोड २८ लाख एसएमएस आदानप्रदान
काठमाडौं । दशैँ तथा अन्य खुशीयालीकाे समयमा कसैलाइ भेटेर,कसैलाइ फोन गरेर त कसैलाइ
दशैँलाइ लक्षित गर्दै एनसेलले ल्यायो यस्तो अफर
काठमाडौं । दशैंको समयमा अन्य कम्पनीले जस्तै एनसेल प्रालिले आफ्ना ग्राहकका लागि दशैं
‘स्मार्ट’ बन्दै काभ्रेपलाञ्चोक मालपोत
काठमाडौं । जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलस्थित मालपोत कार्यालय ‘स्मार्ट’ बन्ने तरखरमा छ । ‘स्मार्ट
एलपी ग्यासको सट्टा गोबर ग्यास प्रयोगमा जोड
काठमाडौं । विर्तामोड नगरपालिकाले खाना पकाउने एलपी ग्यासको सट्टा गोबर ग्यासको प्रयोग गर्न
स्काभेटरले ठक्करबाट एकको मृत्यु, चालक फरार
यस्ताे छ आजको विनिमयदर
११ दिनभित्र आफ्ना माग पुरा नभए अनशन बस्ने डा. केसीको…
गाडीको ठक्करबाट साइकल यात्रीको मृत्यु
जर्मनी र नेदरल्यान्ड युरोकपमा छनोट
दशैँ लगत्तै घट्यो सुनको मुल्य: कति पुग्यो?
आफ्नै आमालाइ बलात्कारको प्रयास गर्ने छोरा प्रक्राउ
तपाईको तौल कति छ ? जान्नुहोस् उमेरअनुसारको तौल
यी राशिहरुबीचको प्रेम र बिवाह कहिल्यै सफल हुँदैन,
आइतबार यी राशि हुनेलाई नराम्रो : प्रेम सम्बन्ध